स्टेजमै गएर केपि ओली लाई किस गरेपछि.....आखिर ओलीलाई चुम्बन गर्ने यी महिला को हुन् ? - USNEPALNEWS.COM
स्टेजमै गएर केपि ओली लाई किस गरेपछि…..आखिर ओलीलाई चुम्बन गर्ने यी महिला को हुन् ?
- यूस नेपाल न्युज प्रकाशित मिति: June 24, 2017
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृहजिल्लामा निकै प्रिय छन् । खासगरि, नेकपा एमालेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले लिएको अडान, जिल्लाबासीलाई दिएको महत्वले हरेक झापालीले ओलीप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्ने गरेका छन् । विरोधीहरु समेत ओली भनेपछि हच्किन्छन्, आजकल ।
रुसी कूटनीतिज्ञले वाशिङटन छाडे
यूस नेपाल न्युज	 March 31, 2018
पोखरामा देउवाले भने :-जनतालाई तर्साउन खोजियो
यूस नेपाल न्युज	 November 29, 2017